Hmoo May 7, 2009 at 1:42 PM
Story City too.:)
Moe Cho Thinn May 7, 2009 at 1:53 PM
တွယ်တာမှု သံယောဇဉ်တို့ရဲ့ မမြင်နိုင်သော စွမ်းအားတွေကြောင့် ကိုယ်တို့ဘဝတွေ ပိုပြီး အသက်ဝင် ရှင်သန်ရန် အားအင်တွေ တိုးပွားလာစေတယ်ဆိုတာတော့ အမှန်ပဲ။
သံယောဇဉ် တသီတတန်းနဲ့မို့ တကယ်ပဲ ဖြတ်ရခက်။
မမရေးထားတာလေး စိတ်ကူးနဲ့ တွေ့ပြီး ဖတ်သွားတယ်။ အပြင်မှာ တကယ်ပဲ တွေ့ချင်လိုက်တာ။
sonata-cantata May 7, 2009 at 2:24 PM
ဒီလောက် ပြင်းတဲ့ ကော်ဖီ သူမို့ တခွက်လုံးကုန်အောင် သောက်နိုင်တယ်...ကိုယ်က ကော်ဖီ မကြိုက်ပါဘူး...သူကြိုက်လို့သာ..StarBuck ကိုရွေးရတာ...သက်ခေါ်ရာကို သီက လိုက်တဲ့ သဘောပါ...တွေ့ဖြစ်ခဲ့တာ တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်လည်း စိတ်ဆိုးပါနဲ့ ဝေရယ်
မဇနိ May 7, 2009 at 3:01 PM
အမသက်ဝေ တွေ့ဖြစ်ကြတဲ့တနေ့။ ဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲ ဟင်။
ဓါတ်ပုံလေးတွေလည်း ရိုက်ကြ။ ကော်ဖီသောက်ရင်း ရယ်ကြ။
တကယ်အဲလိုတွေ့ရရင် စကားတွေများ စွံ့အ နေမလား။
နိနိကတော့ လူမှုရေးမပြေပြစ်သူမို့ ထုံးစံအတိုင်း ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး ကော်ဖီတွေ လှိမ့်သောက်နေရမလား။
ကဗျာမလေး May 7, 2009 at 3:14 PM
အွန်လိုင်းမှာတွေ့ပြီး ခင်မင်ကြတာချင်းတူတူ တချို့တချို့ကတော့ တန်ဖိုးမထားကြဘူးနော် ..... လျှို့ဝှက်တတ်ကြတယ် ... ကိုယ်ကအရိုးခံ အမှန်ပြော ဆက်ဆံပေမယ့် တချို့ကဖြင့် မေးရင်မကြိုက် ရှောင်ပြေးတတ်လိုက်ကြတာ။ “သက်ဝေ” တို တွေ့ဆုံမှုလေးကို သဘောတကျ ဖြစ်မိပါတယ်... အားကျလိုက်တာနော်... :)
tg.nwai May 7, 2009 at 4:25 PM
သက်ဝေရေ..လှပတဲ့ တွေ့ဆုံခန်းလေးပါလား..အဲဒီတယောက်ကို တိုးတိုးလေး သွားမေးမှနဲ့ တူတယ်.. သက်ဝေဆိုတာ ဘယ်သူများပါလဲ လို့..ဟဲဟဲ
မအားရတဲ့ ကြားက လှပတဲ့ ပို့စ်လေးကို ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး...
pandora May 7, 2009 at 8:52 PM
မေငြိမ်း May 7, 2009 at 9:02 PM
ဟွန့်.. သူငယ်ချင်းလေးဆိုတော့.. ကိုယ် မဟုတ်တာ သေချာပြီ။ ဘာလဲ အဖွားကြီးတွေကိုတော့ မတွေ့ချင်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောလား.. ခုတော့ ကျမသိပြီ.. တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထားအမှန်ဆိုတာလို.. သက်ဝေရဲ့ သဘောထားအမှန်.. :P
PAUK May 7, 2009 at 11:47 PM
ခင်မင်းဇော် May 8, 2009 at 12:39 AM
ပေါက် မေးခွန်းကိုပဲ ထပ်မေးသွားတယ် သက်ဝေရေ....
strike May 8, 2009 at 5:17 AM
ပုံရိပ် / Pon Yate May 8, 2009 at 9:21 AM
စုံထောက်ကြီး မသက်ဝေ.. ဘယ်တူနဲ့ တွေ့ခဲ့တာလဲ ဟဲဟဲ။
တန်ခူး May 8, 2009 at 11:20 AM
သက်ဝေရေ… ရေးထားတာလေးက စိတ်ဝင်စားစရာလေး… ပြီးတော့ သို့ လော..သို့ လော စဉ်းစားစရာလေးက ပေးခဲ့ပြန်တယ်… တို့ ဆိုရင်တော့ ကော်ဖီဆိုင်မှာ ချိန်းဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး… ကော်ဖီမကြိုက်လို့ လေ… မမသီတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်(ပြန်ဖွလိုက်တာ)… ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဒီထဲက တယောက်က အပြင်မှာ တခါမှ မတွေ့ ဘူးတဲ့ တယောက်ဆိုတော့… အင်း… နောက်မှ ကြိတ်မေးတော့မယ်… စကားမစပ် တို့ လဲ ဘလော့ဂါသက်ဝေအဖြစ်နဲ့တွေ့ ချင်သေးတယ်…
Moe Cho Thinn May 8, 2009 at 11:22 AM
မမ တကယ် strike နဲ့တွေ့တာလား။ g mail မှာ add တယ်ဆိုပြီး ဟိုတခါ စီဘောက်စ်မှာ တွေ့လိုက်တယ်။ သူက မိန်းကလေးလား၊ ယောကျာင်္းလေးလားဟင်။ ပေါက်တို့က မမstrike လို့ ခေါ်နေလို့ပါ။ ဟိ..
မမ F (or) M ပဲ ဖြေပါ.. :)
မသက်ဝေနဲ့တွေ့တာ သူများမဟုတ်ကြောင်း..လာပြေတာပါ အဟိ။
သင်းနွယ်ဇင် May 9, 2009 at 12:19 AM
တွေ့ဖြစ်ကြဖို့ စိတ်ကူးလေးရသွားပါတယ်။ ကျေးဇူး
T T Sweet May 9, 2009 at 9:58 AM
အပြင်မှာ မတွေ့ဖူးဘူး။ ကော်ဖီလဲသောက်တယ် ဆိုတော့ သေချာတာကတော့ ကိုယ်မဟုတ်တာပဲ :D အော် .. သူ .. သူ ... ဘယ်သူများလဲကွယ်းD
khin oo may May 11, 2009 at 1:40 AM
Soke Phwar May 11, 2009 at 4:37 AM
Give meachance too..I already save some money for
more than star buck...
Bar..buffet ...suki..what U want?
myatnoe May 11, 2009 at 6:36 AM
ksanchaung May 14, 2009 at 4:08 PM
စထရွုက်နဲ့ တွေ့ချင်ရင် ဘီယာဆိုင်ကို ချိန်းမှတဲ့။
Kay May 23, 2009 at 5:44 PM
ဒီကတော့.. အုပ်လိုက်ကြီး တွေ့မလို့ လုပ်နေတာ..
မသက်ဝေ ရဲ့ ရသ အရေးအသားလေး ကြိုတ်တယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ။
အရပ်ပိုရှည်လာသလိုဖြစ်နေတာ..ဖိနပ်ကြောင့် ဖြစ်မှာပေါ့။ ဟိုက..အရပ်ပု လို့ မနာလို ဖြစ်နေတာနေမယ်။း)
စီဘောက်မှာ လာနှုတ်ဆက်ထားတာတွေ..ခုမှ တွေ့တယ်..မရယ်။ ခုမှ..ပုံမှန် ပြန်လည်ပတ်ဖြစ်တယ်။း)
သက်ဝေ June 8, 2009 at 4:55 PM
ကိုမှုး Thanks you so much..
ချိုသင်း... တွေ့ကြရဖို့ တကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်...။ Strike က သူ့ကို မမလို့ခေါ်ရင် စိတ်ဆိုးမှာပေါ့...။
မသီတာ... တွေ့ကြမယ်လေ.. ကိုယ်က ကော်ဖီသောက် သီတာက cheese Cake စားပေါ့.. ရတာပဲ...။
နိနိ... ဘာမှမပူနဲ့ တွေ့လိုက်ရင် ပြောစရာစကားတွေ အများကြီး သူ့အလိုလို ပေါ်လာလိမ့်မယ်...။
ကဗျာမလေး... ကျေးဇူးပါ။ ကိုယ်ဆီမှာ ရှိတဲ့ အစိမ်းရောင်အစက်ကလေးတွေ အားလုံးက တကယ်ကိုပဲ သိပ်ချစ်စရာကောင်းကြတယ်...။
သိင်္ဂီ... Tag ပေးတာ ကျေးဇူး။ လှပတဲ့ ပိုစ့်လေးဆိုလို့လဲ ကျေးဇူး နောက်တခါ။ သက်ဝေ ဘယ်သူလဲဆိုတာ နောက်တော့ သိလာမှာပါ... ဟီဟိ
ပန်ပန်... မြင်တာများ.. ခေါ်လိုက်ရောပေါ့ ပန်ပန်ရယ်...။
ဆရာမ မမေငြိမ်း.. ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ သူငယ်ချင်းလေး လို့ ရေးလိုက်တာပါ။ သက်ဝေရဲ့ သဘောထား အမှန်ကတော့ ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ အခုချက်ချင်းကို တွေ့ချင်တာပါ...။
ပေါက် နဲ့ မခင်မင်းဇော်... သီတာနဲ့တွေ့ခဲ့တာ ဟုတ်ပါဘူး.. သို့သော် သီတာ့လိုပဲ ချစ်ရတဲ့သူတယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့တာပါ...။ (ဆက်ဖွလိုက်ခြင်း...)
အစုတ်ပလုပ် Strike... လာခဲ့.. သတ်မယ်...။ မမ လို့ ခေါ်လိုက်ရမလား.. ဟင်း...။
ပုံရိပ်... အင်း... အားလုံးနဲ့တော့ စိတ်ကူးထဲမှာ တွေ့နေတာ အမြဲတမ်းပါပဲ...။
တန်ခူး နဲ့ ဆွိ... အများကြီး မစဉ်းစားပါနဲ့လေ။ မကြာခင်မှာ တွေ့ကြမယ်နော်။
အမည်မသိ နဲ့မမခင်ဦးမေ... Strike ရဲ့စကားကို တယ်ယုံကြတာကိုး... ဟဲဟဲ
မွန်မွန်... ဒီကို လာတုန်းကတော့ မခေါ်ပဲနဲ့..။ လူဆိုး...။
သင်းနွယ်... လာဖတ်တာ ကျေးဇူး...။ စိတ်ကူးထဲကလို တွေ့ပြီးပြီလား...။
ကိုစုတ်ဖွား... Thank you very much. I love Suki... Haa.. Haa...
မြတ်နိုး... ညီမကို တွေ့လိုက်ပါတယ်... စက်ဘီးလေးနဲ့ လာတာလေ...။
ကိုစမ်းချောင်း... ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာပဲ ကိုယ်ပြောနေတယ်... ဟီဟိ
မကေ... ကျေးဇူးပါ။ အဆင်ပြေတဲ့ တနေ့ တွေ့ကြတာပေါ့။ ကေနဲ့ တို့နဲ့ ဆုံဖူးပါတယ်...။
ဝါသနာတူ၊ ရင်ခုန်သံတူ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ အားလုံး မကြာခဏ တွေ့ဆုံနိုင်ကြပါစေ ဟု ဆုတောင်းပါသည်။